गृहमन्त्री वादललाई खुल्ला पत्र : श्यामबहादुर बोहरा ‘अटल’ आज तपाई र तपाईको नेता प्रचण्डले के यसको जवाफ दिनुपर्दैन ? – Online National Network
गृहमन्त्री वादललाई खुल्ला पत्र : श्यामबहादुर बोहरा ‘अटल’ आज तपाई र तपाईको नेता प्रचण्डले के यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?
२ बैशाख २०७५, आईतवार १४:३८
१. महान् जनयुद्धको थालनीको लागि त्यसको तयारीको क्रममा तपाई रुकुम रोल्पाका विकट बस्तीहरूमा कहिले रातीको समयमा रित्ता गोठहरूमा, कहिले कतै त कहिले ओडारहरूमा हामीलाई प्रशिक्षण दिँदा भावबिभोर हुँदै भन्नु हुन्थ्यो कि जबसम्म नेपालमा कुनै पनि रूपको शोषण, उत्पीडन, विभेद, असमानता, भ्रष्टाचार र कमिशन प्रथा कायम रहन्छ, जबसम्म यो पुँजीवादी शोषणकारी ब्यबस्थाको पूर्णरूपले अन्त्य हुँदैन, जबसम्म नेपालमाथिको भारतीय बिस्तारवादी उत्पीडन, हैकम र हस्तक्षेप अन्त्य गरी नेपाल पूर्णरूपले स्वाधीन र मुक्त हुँदैन, जबसम्म नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यब्यबस्थाको स्थापना हुुँदैन, तवसम्म हामी प्राण रहुन्जेल कतै रोक्न हुँदैन, झुक्न हुँदैन र बिश्राम लिन हुँदैन ।
हामी सहिद हुन सक्छौं, अरु लड्नुपर्छ । अरु कोही सहिद होलान् हामी बाँकी रह्यौं भने अन्तसम्म क्रान्ति जारी राख्नुपर्छ । कोही भाग्न सक्छन् तर हामी अटल आस्था र पूर्ण निष्ठाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
२. संबिधानसभाको दोश्रो निर्बाचनको समयमा तपाईले मतपेटिकामा घन हान्नुभएको थियो, बन्चरो हान्नुभएको थियो, आगो झोस्नुभएको थियो, बम हान्नु भएको थियो, बन्दुक पड्काउनु भएको थियो । यो चुनाब बैदेशिक साम्राज्यवादको गुरुयोजनामा हुँदैछ, प्रतिक्रान्तिलाई बैधानिकता दिन यो चुनाव हुँदैछ, यस्तो संबिधानसभाबाट बन्ने संबिधान प्रतिक्रियावादी संबिधानबाहेक अरु हुनै सक्तैन भनेर बाह्र हात उफ्रनुहुन्थ्यो, आपूmलाई महान र अद्वितीय क्रान्तिकारी भएको खुबै प्रलाप गर्नुहुन्थ्यो, हैन ?
अनि प्रचण्डलाई लालगद्दार र लाल डाँका भन्नु हुन्थ्यो, प्रचण्ड भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’को एजेन्ट हो, अक्षम्य धोकेवाज हो भन्नु हुन्थ्यो । अहिले हेर्दा लाग्छ, त्यसबेला तपाईले लगाएका ति अभियोग सही नै देखिन्छन । त्यसबेला म त्यही माओवादी केन्द्रमै थिएँ, उतिबेला आजको जस्तो पूरै पतित र निर्लज्ज भइसकेको थिएन माके । आजको जस्तो पूरै बिचार र सिद्धान्तबाट च्यूत भएर नवप्रतिक्रियावादमा भासिसकेको थिएन । आज त पूरै निर्बस्त्र भएको छ माओवादी केन्द्र नामको बहुराष्ट्रिय कम्पनी । ठीक त्यसैबेला तपाई लंगौटी सडकमा फ्याँकेर एउटा हातले लाज छोप्दै र अर्को हातले यथास्थितिको बिरोध गर्ने क्रान्तिकारीका बिरुद्ध बन्दुक समात्न त्यहाँ पुग्नु भएको छ ।
३. तपाईंले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुभएको छ । नेकपा राजनीतिक होइन पो भन्नु भएको रहेछ । उदेक लाग्छ , तपाई खुबै क्रान्ति गर्छु भनेर उर्लिनुभयो । पार्टी बिभाजन पछि दोश्रो संबिधानसभाको निर्बाचनको क्रममा एमाओवादीलाई हराउन कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको थिएन । कांग्रेस र एमालेबाट मोटो रकम खाएर आफ्ना कार्यकर्ताको भोट बेच्नुभएको थियो ।
त्यो कुन निष्ठा, समर्पण र इमानको राजनीति थियो गृहमन्त्रीज्यू ? त्यो कार्य कुन मालेमाको सैद्धान्तिक धरातलमा आधारित थियो ? अनि त्यतिबेला तपाईले जनयुद्ध जारी नै छ भन्नुहुन्थ्यो, हैन त ? तपाईले दोश्रो संबिधानसभाको चुनाव सेरोफेरोमा जे भन्नु भएको थियो, स्थिति अहिले पनि ठीक उस्तै हो । त्यसबेला तपाईले जसरी दलाल संसदीय ब्यबस्थाबिरुद्ध प्रहार गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ठीक त्यसै गरिरहेको छ । अनि कसरी भयो नेकपाको गतिबिधि अराजनीतिक ?
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि फेरि कुर्लनु भो, छँदा छँदाको पार्टी फुटाउनु भयो, संबिधानसभा चुनावमा बम र बन्चरो हान्नु भो, भोट बेच्नु भो र फर्केर फेरि आफैँले थुकेको थुक चाट्नु भो । यो तपाईको दोश्रो बिलयन हो । अब तपाईहरू सबैले नाम मात्रको पार्टी माआवादी केन्द्रलाई नै एमालेमा बिलिन गराउँदै हुनुहुन्छ, हैन ? तपाइको यस्तै रबैया हो भने जीवनको आखिरी घडीमा तपाई कहाँ बिलिन हुने हो ? कृपया तपाई उत्तेजित भाषा नबोल्नुस्, तपाई अराजनीतिक बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।
अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुन मानेमा अराजनीतिक भयो ? के यो दलाल संसदीय ब्यबस्था स्वीकार गर्दैनौं भन्नु अपराध हो ? के बैज्ञानिक समाजवादी ब्यबस्था चाहन्छौं भन्नु अपराध हो ? बिभिन्न बिकृति र बिसंगतिको बिरोध गर्नु के असंबैधानिक हो ? यदि त्यसो हो भने तपाईले पहिले आफैँलाई अपराधी हुँ भनेर भन्ुनुस्, गृहमन्त्रीको पद त्यागेर जेल सजायको निबेदन गर्नुस् । के तपाईसंग त्यसो गर्नसक्ने हिम्मत छ ? यदि तपाइले त्यसो गर्न सक्ने हो भने तपाइलाई म सबैभन्दा नैतिक मान्छे ठान्ने छु ।
४. जनताका आवाजहरूलाई दुनियाँको कुन ताकतले रोक्न सकेको छ ? समयको बेगवान् प्रवाहलाई संसारको कुन शक्तिले छेक्न सकेको छ ?
के यस्तो इतिहास कतै देख्नुभएको छ गृहमन्त्रीज्यू ? दुनियाँका कुनै पनि शासक बर्गले यथास्थितिको बिरोध गर्दै अग्रगमन चाहने, स्वाधीनता, समानता र मुक्ति चाहने उत्पीडित समुदायलाई आतंककारी, अराजनीतिक र असान्दर्भिक करार गरेर दमन गर्ने गरेको परम्परालाई नै तपाईले पछ्याइरहनु भएको छ । नेपालकै इतिहासको कुरा गर्ने हो भने पनि त हिजो राणाहरूले समयको प्रवाहलाई छेक्ने कोसिस गरे भने पंचहरूले त्यतिबेला कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई आतंककारी र अराष्ट्रियतत्वको आरोप लगाउदै दमन गर्ने दुस्प्रयास गरे ।
राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा तपाईंले नेकपाका उच्च स्तरका नेताहरूलाई किन अनाहकमा झुट्ठा मुद्दा लगाएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भो ? यदि चुनाव बहिस्कार गरेकै कारणले त्यसो गर्ने हो भने तपाईंले गरेको त्यही कार्य कसरी राजनीतिक ठान्नुहुन्छ ? शिघ्रातिशिघ्र तपाईंले झुट्ठा मुद्दा फिर्ता लिएर राजनीतिक ढंगले प्रस्तुत हुने कि नहुने ? धनगढीमा चैत्र २४ मा भएको प्रहरी दमन र ज्यादतिको उचित छानविन गरेर दोषिमाथि कारवाही गर्न सक्ने हैसियत के तपाईंसंग छ ?
होइन भने शान्ति, सुब्यबस्था, अमनचयन कायम गर्छु भनेर फोस्रो बकबास किन ? आज पनि तस्कर र गुण्डाहरू खुलेयाम छाती खोलेर हिँडिरहेका छन, माफियाहरू, मानवतस्करहरूको बिगबिगीले समाज आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र ब्यापक बनेको छ । खोइ कहाँ आएको छ नेपाली समाजमा परिबर्तन ?
स्थिति हिजोभन्दा आज झन् संकटग्रस्त छ । के यो दलाल पुँजीवादी संसदीय ब्यबस्थालाई अजर अमर ठानिरहनु भएको छ ? महान् जनयुद्धको बलमा करीब मशानघाट पु¥याइसकिएको कुरूप संसदीय ब्यबस्थालाई रंगरोगन गरेर जनचाहना र अपेक्षा बिपरित जबर्जस्त लादेर जनता चुप लागेर बस्छन भन्ने ठान्नु भएको छ ? यो सम्भव छैन ।
— श्यामबहादुर बोहरा ‘अटल’ / लेखकका यी नीजि विचार हुन् । प्रधान सम्पादक
newsabhiyan.com बाट साभार